Shir Qarsoodi ah oo 1977 looga hadlay Soomaaliya waxaa tarjumay : yuusuf garaad - iftineducation.com
iftineducation.com – Goobtu waa Barliin-Bari. Waa maalin Axad ah. Abriil waa 3 1977. Waa Guriga Golaha Dhexe. Shir socday shan saacadood oo dhowdhow ayaa dhex maray Hoggaamiyaha Cuba, Fidel Castro oo markaa ka soo laabtay Geeska Afrika iyo Hoggaamiyaha Jarnalka Bari Erich Honecker. Marka lagu daro biririf dhexda ah, shirku wuxuu socday barqadii ilaa makhribkii. Wuxuu kulanku billowday barqadii 11:00 saac.
Waxaan kuu soo gudbinayaa hadalladii ay is weydaarsadeen labada hoggaamiye oo la faafiyay marka laga reebo 16 bog ee ugu horreeya oo qarsoodi ah.
Warbixintu waxay leedahay, Jaalle Erich Honecker si diirran ayuu u soo dhoweeyay Jaalle Fidel Castro iyo Jaallayaasha reer Cuba ee ku wehliyay wadahadalka hoose ee lagu qabtay magaca Guddiga Dhexe. Wuxuu hadalkiisa ku furay:
Waan ku faraxsan nahay booqashadaada Jamhuriyadda Jarmalka Bari iyo fursadda aan isku weydaarsaneyno aragtida ku saabsan natiijada booqashaada dhowr dal oo Afrika iyo Carabta ah. Aniga oo ku hadlaya magaca Politburo [Guddiga Siyaasadda ee dalka ugu sarreeya] waxaan jeclahay in aan mar kale kuu caddeeyo in aan booqashadaada dalalkaas u aragno mid muhiim ah. Waxaan ku soo dhoweynayaa Jaalle Fidel Castro in uu hadalka qaato.
Warbixinta Fidel Castro
Inta aanan ka amba bixin Cadan, waxaan Hoggaanka PDRY [Yemen-ta Koofureed] isla garannay baahida in la sameeyo wax kasta oo suurta-gal ah si ay is af garad u gaaraan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Si wanaagsan ayaa la iigu soo dhoweeyay Soomaaliya. Waxaan ka dalbaday in aanay sameyn isu soo bax. Siyaad Barre aad ayuu saaxiibtinnimo iigu muujiyay cashadeennii koowaad. Inta aanan imaan ayaan helay jawaabtiisa dhambaal aan anigu hore ugu diray oo ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Ergay ayaan hore ugu diray Soomaaliya, kaas oo wadahadal la yeeshay Madaxweyne ku Xigeenka Samatar iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Suleymaan. Samatar isagu wuxuu u janjeeray Bidixda, halka uu Suleiman matalayay Midig. Wadahadalkii uu wakiilkeennu la qaatay waxay ahaayeen kuwo adag.
Inta aanan PDRY ka soo tegin ayaan xog badan ka helay xaaladda Soomaaliya. Awoodda garabka Midig wey sii kordheysaa. Wasiirka Arrimaha Guduhu wuxuu isku deyayaa in uu sameeyo wax kasta oo suurta-gal u ah si uu Soomaaliya ugu dhoweeyo Sucuudiga iyo dalalka Imberiyaalistaha ah. Samatar awooddiisu wey wiiqmeysaa. Waxa oo dhami waxay u muuqdaan in kooxaha Midigtu ay geeska geliyeen [Samatar] oo ay koone ku kuuseen.
Habeenkeyga koowaad waxaan rabay in aan fahmo Siyaad Barre iyo kacaanka Soomaaliya. Cashadii dusheeda kumeynaan yeelan wax wadahadal siyaasadeed ah oo nuxur leh. [Siad] Barre wuxuu ii fasiray heerarkuu soo maray kacaanka Soomaaliya.
Subixii xigay waxaa naloo sameeyay barnaamij ballaaran oo booqasho ah. Waxaan nala geeyay goobo tiro badan. Waxaan tagnay xero ay Cuba dhistay oo malliishiya lagu tababbaro, Dugsi Beeraha, Iskuul carruurta reer guuraaga iwm. Saacado ayaa nala wareejinayay, inkasta oo aynaan weli yeelan wadahadal Siyaasadeed, dibadbax weyn oo Garoonka kubbadda cagta ka dhacayana aan tegeyno duhurnimada. Waxaan fahmay in ay doonayaan in ay ka baaqsadaan in aan yeelanno wadahadal noocaas ah bannaanbaxa ka hor.
Dibadbixii wuxuu billowday aniga iyo Siad Barre oo aan weli wax wadahadal gaar ah yeelan, tan darteed aad ayaan u feejignaa. Siad Barre [hadalka uu jeediyay] wuxuu ahaa kibraan aan hakaneyn. Malahaa wuxuu rabay in uu na baqdingeliyo.
Khudbadda aan ka jeediyay kulankii dadweynaha waxaan ka hadlay siyaasadda Imberiyaaliistaha ee Bariga Dhexe, kaalinta dib u socodka ah ee Saudi Arabia iyo ficillada quwadaha kale ee dib u socodka ah. Sidaa ayaan yeelay aniga oo og in waddanka uu ka jiro janjeer weyn oo daneynaya in xiriir dhow lala yeesho dalalkaas. Waxaan ka hadlay halganka PLO [Ururka Xoreynta Falastiin], Kacaanka Ethiopia iyo Kacaanka Libya. Iyo Algeria-da horusocodka ah ee la doonayo in la faquuqo. Mozqmbique ayaan ka hadlay, markaas ayaan gunaanadkii keliya uga hadlay sida Imberialistuhu uu u doonayo in uu dib u celiyo horukaca Soomaaliya. Siyaad Barre wuxuu i horkeenay ka qeyb galayaasha dibadbaxa dadweyne isaga oo aan oran kelmad siyaasad ah.
Inta aan kulanka dadweyne dhicin, waxay sii cayaareen hal qeyb [45 daqiiqo] oo kubbadda cagta ah. Lama oga in cayaartu ay ahayd wax lagu soo daray dibadbaxa iyo in arrintu ay taa cagsigeed tahay. Khudbaddeydu waxay ka soo horjeedday damaca garabka Midig waxayna taageeertay garabka Bidix. Waxaan aragnay in ku dhowaad dhammaan xubnaha Golaha Dhexe ay sabciyeen, marka laga reebo Suleymaan iyo dadkiisa. Samatar aad ayuu u qancay, xataa Siyaad Barre wuxuu u muuqday in uu qancay. Si kastaba ha ahaatee, kulanka si toos ah loogama sii deyn Radio ama TV.
Habeenkaas ayaan billownay in aan ka hadalno dhibaatooyin cayiman annaga oo joogna meesha aan deggan ahay. Aniga wey ii muuqatay in ay tahay in aan taxaddarno, waayo wey iska caddeyd in Wasiirka Arrimaha Guduhu uu meesha ku rakibay qalab na basaasa. Isla habeenkaas ayaa aakhirkii Siyaad Barre uu ka hadlay Ethiopia. Wuxuu Ethiopia la meel dhigay Boqortooyadii Tsar wuxuuna yiri Ethiopia waa Gumeysiga keliya ee soo haray. Mahadi ha ka gaarto xikmaddii Lenin, Boqortooyadii Tsar meesha wey ka baxday, laakiin Ethiopia wey ka jirtaa.
Fidel Castro iyo Mengistu Haile Mariam
Muddo hadda wakhti laga joogo ayuu [Siyaad Barre] u soo jeediyay Ethiopianka in ay labada dal sameystaan nidaam Federaal ah oo ka dhexeeya amaba ay midoobaan. Ethiopia markaas kama aanay jawaabin, ase hadda iyada ayaaba soo jeedineysa xalkaas.
Isaga oo ay ku qanacsanaan aad ahi ay ka muuqato ayuu fasiray sida uu isugu dayay in uu Ethiopia xal la gaaro.
Fursadda waxaan uga faa’iideystay in aan Siad Barre u sheego in aan berri subax aadayo Ethiopia. Waxaan weydiiyay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo Mengistu [Hoggaamiyaha Ethiopia]. Wuu aqbalay.
F. G. Waxaan rajeynayaa in aan qeyb kale soo gudbiyo mustaqbalka.
Xigasho: Archiv der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR im Bundesarchiv. Waxaa soo helay Christian F. Ostermann. Tarjumada Jarmal ka dhigay Ingiriis David Welch waxaana mar kale ka hubiyay Ostermann. Yusuf-Garaad ayaa Soomaali u rogay.
Daawo Gabar soomali aktarad ah oo film anshax xumo ah soo jishay